Tsvaga iyo Zara lingerie muunganidzwa | Bezzia
Maria vazquez | | Underwear
Zara akatanga yake kutanga nguo dzemukati kudonha uku, nekudaro kujoina iyo tsika yekusiyana iyo mafemu anoita kunge ari kutora nhasi. Muunganidzwa unopa muyero wakakwana pakati pekunyaradza nehukama, kubheja pazvinhu zvemhando yepamusoro.
Zvino kana tichigona kutaura kuti Zara inotipa musoro kuzvigunwe. Bras, mapanti, mabhodhireti, mapyjamas, majasi nemadhirezi anotsvedza anozadza muunganidzwa umo satin apedza kumira, asi matiri tinokwanisa zvakare kuwana zvese zviri kuumba uye zvakagadzirwa zvipfeko kuti zvienderane nemutsara wemuviri wedu uye zvinotipa kunyaradzwa kwakanyanya. Tinokuratidza!
2 Zvipfeko zvemukati zvaZara
Kuti tirare tinogona kuwana mune iyo nyowani yekuunganidzwa yemachira kubva kuZara classic mapyjamas nekusiyanisa mapaipi akagadzirwa nemucheka wekusanganisa machira. Zvakare seti ye bhurukwa rinoyerera uye shati ye satin, pamwe chete nezvikamu zvisina musono zvine ribbed kuitira kunyaradzwa kwakanyanya. Misoro, t-shirts uye leggings iwe aunogona kusanganisa sezvaunoda.
Asi hazvisi zvese zviri mapijama kana zvipfeko zvakagadzirirwa kupa nyaradzo yakanyanya. Zara zvakare inosanganisira mune ino muunganidzwa zvinyoro nyoro uye zvido zvebonde. Slip madhirezi netambo dzakatetepa uye zvakapetwa kana zvakarukwa zvakagadzirwa nemicheka yesiriki mumatoni akapfava.
Zvipfeko zvemukati zvaZara
Iyo Triangle bralettes uye satin mafupi ne machira, tambo kana kuunganidzwa, vane basa rakakura muunganidzwa uyu. Mune akapfava mavara senge machena, parera kana mauve, iwe uchavawana iwo aine maviri mashomaimal dhizaini uye magadzirirwo akapfuma mune ruzivo. Asi hazvisi zvese zvehukama zviri mumavara akapfava, dema rine basa rakakura mumabodyysuits uye semitransparent bras.
Uye zvakare, iwe unowana mune yekuunganidza mbatya ne kuumba maitiro machira iyo inobatsira kusimudzira uye kunongedza chimiro. Zvakare zvimwe zvakagadzirwa nemucheka unoenderana necontour yemuviri wako kuti upe kunyaradzwa kwakanyanya chero chiitiko chauri kuzoita. Dema bralette ine V-neckline uye yakakwira-chiuno panties, yakakwana kune yako zuva-kusvika-zuva.
Iwe unofarira here zvirevo zveiyo nyowani Zara nguo dzemukati?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Underwear » Tsvaga iyo Zara lingerie muunganidzwa
Hirstyles idzo dzaucharatidzika kuonda